Magaalooyinka ugu dadka badan aduunka | Wararka Safarka
Magaalooyinka ugu dadka badan aduunka
Maria | | safarka
Marka loo eego qiyaastii ugu dambeysay ee Qaramada Midoobay, ku dhowaad 7.700 bilyan oo qof ayaa ku nool meeraha. Kuwaas, 450 milyan oo qof ayaa ku nool kaliya ilaa labaatan magaalo: 16 Aasiya (inta badan Pakistan, Hindiya, Shiinaha iyo Indooniisiya), 4 Latin Amerika (halka Buenos Aires iyo Sao Paulo ay taagan yihiin), 3 magaalo oo Yurub ah (leh London iyo Moscow ayaa hogaaminaya), 3 Afrika (halka Qaahira ka muuqato) iyo 2 Waqooyiga Ameerika.
Waxaa looyaqaanaa magaalooyin waaweyn waxaana lafilayaa in sanadka 2050, ay 66% dadka aduunka kunool ay kujiraan. Ma rabtaa inaad ogaato waa kuwee 10ka magaalo ee adduunka ugu dadka badan? Waan kuu sheegi doonaa!
Mexico DF wax badan ayaa iska badalay sanadihii la soo dhaafay. Laga soo bilaabo 1970s, ku dhowaad 40 magaalo ayaa lagu lifaaqay aagga magaalooyinka ee Magaalada Mexico. Iyada oo halkan ay ku nool yihiin 22,2 milyan oo qof, caasimadda dalku waa meel firfircoon oo leh nolol dhaqameed xiise leh, xarun qurux badan oo taariikhi ah, iyo gaashanno hodan ah oo aad ku ogaan doontid nuxurka dhabta ah ee Mexico.
Xarunta taariikhiga ah ee magaalada Mexico City waa meel aad u wanaagsan oo socod lagu maro isla markaana laga bilaabo sahaminta caasimada. Zócalo, oo ah fagaaraha ugu weyn magaalada, calanka weyn ee dalka ayaa duulaya isla goobtaasna waxaa ku yaal Katidralka weyn, Qasriga Qaranka, Dhismaha Dowladda iyo Duqa Magaalada Museo del Templo. Palacio de Bellas Artes waa dhisme kale oo qurux badan oo lagu daro liiska. Hareeraha sidoo kale waxaa ku yaal dukaamo yaryar iyo maqaaxiyo halkaas oo aad ku tijaabin karto cunno macaan oo reer Mexico ah.
Iyadoo ay deggan yihiin 20.186.000, Sao Paulo, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Brazil, waxay leedahay qaab nololeed aad u magaalo leh iyo dhismayaal dhaadheer oo badan. Jardiinooyinka, jidadka, matxafyada, tiyaatarada, taalladaha ... waxaa jira waxyaabo aan dhammaad lahayn oo lagu sameeyo magaaladan.
Booqashada Sao Paulo waa inay ka bilaabataa xarunta taariikhiga ah halkaas oo aad ka heli doonto qaar ka mid ah meelaha dalxiiska u dalxiis taga sida Catedal da Sé, Monastery-ka Sao Bento, Patio do Colegio (kuliyada Jesuit ee aasaasay magaalada 1554) , Dhismaha Altino Arantes, Suuqa degmada ama Calle 25 de Março.
Kadib ka tag qolka wadadaada si aad u booqato Avenida Paulista, oo ah xarunta dhaqaalaha ee magaalada, waddo dheer oo seddex kilomitir dheer ah oo hoy u ah dukaamo, makhaayado, baararka iyo matxafyada. Toddobaad kasta dhammaadkiisa, waa la lugeeyaa si muwaadiniinta iyo dalxiisayaashu ugu sahmi karaan lug ama baaskiil. Farshaxanno badan iyo fannaaniin badan ayaa ka faa'iideysta fursadda si ay u soo bandhigaan dhammaan kartidooda oo ay uga dhigaan mid ka mid ah waddooyinka ugu nolosha badan Brazil.
Safarkaaga Sao Paulo waa inaad sidoo kale ku dartaa booqashada madxafyada magaalada iyo haddii aad ka qayb geli karto bandhig muusig… Sao Paulo waa caasimad dhaqameedka Latin America sidaa darteed dalabku waa mid aad u weyn.
Magaalada dhismayaasha dhaadheer ayaa ah meesha ay ku riyoodaan safarro badan. Tirada dadka deggan 20.464.000 waa magaalada siddeedaad ee ugu dadka badan adduunka. New York waxay bixisaa deegaan iyo qaab nololeed u gaar ah oo u horseeday inay noqoto caasimada ugu muhiimsan ee dhaqaalaha iyo dhaqanka adduunka.
Kaqeybgalka muusigga ee Broadway, ciyaar NBA ah, ka gudubka Brooklyn Bridge, ka adeegashada Fifth Avenue, inaad habeen ku dhex qaadato Times Square ama aad socod ku dhex marto Central Park ayaa ka mid ah waxyaabaha aad rabto inaad sameyso.
Manhattan waa degmada ugu caansan magaalada New York uguna booqashada badan. Waa la ogyahay in dad badani ku khaldamaan New York Manhattan. Si kastaba ha noqotee, juqraafi ahaan sidoo kale waxaa loo qaybiyaa afar degmo oo kale: Brooklyn, Queens, Bronx iyo Staten Island.
Tirada dadka deggan 20.711.000, Karachi waa caasimadda gobolka Sindh iyo magaalada ugu dadka badan Pakistan. Karachi waxay horey u ahaan jirtay magaalo xeebeedka galbeedka India India maantana waa xarunta dhaqaalaha, ganacsiga iyo dekedaha ee Pakistan.
In kasta oo aysan lahayn soojiidasho dalxiis oo khuseeya, inta lagu guda jiro booqashada magaalada waxaad ku joogsan kartaa National Stadium ama Matxafka Badda ee Pakistan. Waxa kale oo mudan in la booqdo Matxafka Qaranka ee Karachi iyo qaar ka mid ah taallooyinka waaweyn sida masjidka weyn ee Masjid-i-Tuba iyo masaajidka Quaid-i-Azam, oo ay ku jiraan meydadka aasaasihii Pakistan: Ali Jinnah.
Filibiin waa jasiirad ka kooban 7.107 jasiiradood oo magaceeda lagu leeyahay Boqorka Isbaanishka Felipe II. Isbaanishku wuxuu ku qaatay 300 sano halkaas, sidaa darteed si uun in taabashada Isbaanishku wali waddanka uga jiro.
Isku darka dhaqammada iyo hiddaha ayaa Manila, caasimadda ka dhigtay magaalo ay ka buuxdo waxyaabo is-diiddan iyo fursado. Iyada oo ay degan yihiin 20.767.000, Manila waa magaalada lixaad ee ugu dadka badan meeraha waxayna leedahay taariikh gumaysi oo aad u joogta derbiyada magaalada gudaheeda, halkaas oo aad ku arki doontid dukaamo gacmeedyo iyo barxado gudaha ah oo nasiin ka bixinaya buuqii iyo mashquulkii Manila
Si ka duwan dalalka kale ee Koonfur-bari Aasiya, Filibiin kuma badna dalxiisayaasha, taas oo ka dhigaysa bedel ku habboon oo lagu raaxeysto inta lagu jiro baxsiga. Waddankani wuxuu lamid yahay beeraha bariiska cagaaran, magaalooyin waali ah, fulkaano aan caadi ahayn iyo dad had iyo jeer faraxsan.
Shanghai waxay ku taal daarta wabiga Yangtze, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu dadka badan oo ay ku nool yihiin 20.860.000, taas oo noqotay astaan ​​magaalo caalami ah u ah horumarka farsamada iyo dhaqaalaha Shiinaha.
Shanghai waxay leedahay soojiidasho dabiici ah taas oo ka dhalatay isku dhafkaas u dhexeeya kan casriga ah iyo midka soo jireenka ah, maadaama ay jiraan xaafado ay daaraha dhaadheer ee dhaadheer ku urursan yihiin iyo kuwa kale oo noo kaxeeya Shiinaha dhaqameed. Iyadoo in ka badan 600 sano oo taariikh ah, qaybtii hore ee dalxiisayaasha Shanghai waxay ka heli doonaan nuxurka Shiinaha ugu caansan halka Pudong, degmada maaliyadeed ee magaalada ay leedahay muuqaal casri ah oo mustaqbal leh.
Mid kale oo ka mid ah meelaha ugu caansan Shanghai waa Bund. Halkan waxaan ka heli karnaa dhowr dhisme oo wakiil ka ah xilligii gumeysiga oo leh qaabka Yurub oo kugu martiqaadaya inaad socod dheer ku tagto Webiga Huangpu. Intaas waxaa sii dheer, doonyaha dalxiis ee webiga ayaa baahi weyn u qaba dalxiisayaasha oo aragtida aaggan habeenkii waa bandhig midabbo iyo nalal.
Delhi waa fowdo, buuq iyo dad badan. Dad badan, magaaladan oo ay ku nool yihiin 22.242.000 waa marinka laga galo Hindiya, sidaa darteedna, waa xiriirkoodii ugu horreeyay ee ay la yeeshaan waddanka.
Waxay leedahay qalcado layaableh, suuqyo mashquul badan habeen iyo maalin, macbadyo waawayn iyo waliba sadex goobood oo qayb ka ah liiska UNESCO ee Hidaha Dunida: Humayun's Tomb (muunad qaab dhismeedka Mongolian ah oo loo arko inay tahay xabaashii-ugu horeysay iyo horudhaca qaabka Taj Mahal oo ku taal Agra), Qutb Complex (qaybteeda ugu caansan waa Qutab Minaret, kan ugu sarreeya adduunka oo dhererkiisu yahay 72 mitir iyo badh) iyo Red Fort Complex (oo mar ka baxsan qasriga Mongolia).
Kuuriyada Koonfureed waa mid aan la koobi karin oo caasimaddeeda, Seoul, waa wax la yaab leh. Iyada oo ay deggan yihiin 22.547.000, waa magaalada saddexaad ee adduunka ugu dadka badan iyo sidoo kale caasimadda dhaqaale, taariikheed, dalxiis iyo dhaqan ee dalka oo dhan. Xaafadaha dhaqanka, daaraha dhaadheer ee vertigo, dukaamada K-pop-ka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo… waxaa jira waxyaabo badan oo halkan laga arki karo.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee aad ugu quusin karto dhaqanka Kuuriya una baran karto taariikhdeeda waa inaad booqato mid ka mid ah shanta daarimood ee Boqortooyada Joseon (Gyeongbokgung, Changdeokgung, Gyeonghuigung, Changgyeonggung, iyo Deoksugung), oo soo bandhigaya qaab nololeedka boqortooyada Kuuriya. qiyaastii qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad.
Macbadyada Buddhist-ka ee Kuuriyaanka ah ee ku xeeran dabeecadda waa kuwo cajiib ah waxayna sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad si fiican u ogaatid dhaqanka Kuuriyada Koonfureed. Meelaha kale ee soojiidashada dalxiis ee Seoul waa suuqyadeeda dhaqameed iyo cunnadeeda soo jireenka ah, oo si caalami ah looga tixgeliyo.
Waxaa laga yaabaa in Jakarta uu yahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan safarayaasha doorta Indonesia fasaxyadooda maadaama ay doorbidaan inay sahamiyaan meelo kale. Si kastaba ha noqotee, magaaladan oo ay ku nool yihiin 26.063.000 waxay leedahay xarun taariikhi ah oo qurux badan oo mudan in la booqdo.
Deganayaasha Dutch-ka waxay degeen Kota Tua, sidaa darteed dhismayaasha u ekaa gumeysiga ayaa ku badan halkan. Tusaale ahaan qaab dhismeedkani waa Matxafkii Taariikhda, oo ahaan jiray hoolka magaalada.
Caasimadda Japan waa magaalada ugu dadka badan adduunka waxaana ku nool 37.126.000. Cajiib! Tokyo waa meel firfircoon, oo ay ka buuxaan fursado dalxiis iyadoo aan loo eegin waqtiga sanadka. Had iyo jeer waxbaa la qabtaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Magaalooyinka ugu dadka badan aduunka
Qorrax-dhaca ugu wanaagsan Kariibiyaanka